Fomba folo hisaintsainana ny mpino | TOKO VAVAKA
Home Drafitra famakiana Baiboly Fianarana Baiboly Fomba folo hisaintsainana ny mpino
Fomba folo hisaintsainana ny mpino
Androany dia hampianatra ny tenantsika fomba folo hisaintsainana ny mpino isika. Ny fanelanelanana amin'ny tenany dia ny mieritreritra na mihoatra. Manosotra. Mandray anjara amin'ny fandinihana na fisaintsainana. Raha ny fisaintsainana kosa dia ny fifantohana amin'ny zavatra ara-panahy ho endrika fanoloran-tena manokana, araka ny rakibolana Merriam Webster. Ny fanelanelanana dia mieritreritra lalina ny Tenin'Andriamanitra.
Ahoana ny amin'ny famerenantsika ny sasany amin'ireo ampahany ao amin'ny soratra masina miresaka momba ny fisaintsainana.
Andinin-teny momba ny fisaintsainana
Sal.1: 1-3 Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, na mijanona eo amin'ny lalan'ny mpanota, na mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira! Fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany, ary ny lalàny no misaintsaina andro aman'alina.
Josoa 1: 8 “Ity boky misy ny lalàna ity tsy hiala amin'ny vavanao; fa misaintsaina azy andro aman'alina ianao, hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo; fa amin'izany dia hambinina ny làlanao amin'izay dia hahita soa ianao.
Inona avy ireo fomba misaintsainan'ny mino?
Miezaha ho fanahy iniana.
Ny dingana voalohany ho an'ny lehilahy maniry ny hahalala ny Tenin'Andriamanitra dia ny fahavononany hanao izany amin'ny fikasana marina. Betsaka ny mpino no maniry hisaintsaina fa tsy ny rehetra no iniana sy fanahy iniana. Ny minia manao soa dia manamarika ny maha-zava-dehibe ny fitomboana.
Tokony hampisongadina fikasana hianatra sy handinika ny Tenin'Andriamanitra isika, amin'izay vao misy dikany lehibe ny fitomboana.
Mitadiava toerana mangina.
Tsarovy fa Andriamanitra dia na aiza na aiza ary mitondra ny fanatrehany miaraka amintsika isika. Ka na inona na inona toerana misy azy dia azo atao ny misaintsaina.
Manao ahoana ny fahanginan'ny tontolo iainana ho antsika?
Mialà amin'ny fanelingelenana.
Ara-dalàna raha mivezivezy any an-doha amin'ny zavatra maro ifotoran'ny olombelona ny saintsika. Ny eritreritra ny zavatra hohanina, ny eritreritra ny varotra amin'ny asa aman-draharaha, ny asa ary ny tetik'asa hovitaina any am-piasana, mety hiditra ao mihitsy aza ny tsy fahafaham-pon'ny mpanjifa, ny fomba fandrehitra ny fiara, ny fividianana enta-mavesatra ho an'ny ankizy / fianakaviana fa araka izay heverina ho rehetra. zava-dehibe, tsy maintsy esorintsika tanteraka izy ireo amin'izany fotoana izany mba hisaintsainana.
Ny fanesorana ireo fanelingelenana dia manova ny fifantohantsika amin'ireo fanahiantsika sy ny fiahiantsika ny tenin 'Andriamanitra.
Ny fisaintsainana ny Tenin'Andriamanitra dia tsy mety hitranga rehefa tsy milamina ny saintsika. Tsy hilazana hoe tsy misy dikany amin'Andriamanitra ny filantsika fa ny mahatakatra fa tsy afaka mandray anjara amin'ny zaza tsy ampy taona isika. Andriamanitra dia miteny amin'ny alàlan'ny fanelanelanana fa hitranga ve izany rehefa manerana ny toerana ny saintsika?
Esory ny ahiahy, ny fanahiana tsy mamaha ny ahiahy. Esory ny fikarakarana, fa mifantoha amin'izay afaka hikarakara azy rehetra. Ampiofano ny sainao hanala ireo fanelingelenana.
Apetraho ny fifantohanao
Psa. 119: 15 Handinika ny didinao aho Ka hibanjina ny lalanao.
Mametraka ny fifantohantsika isika amin'ny alàlan'ny fisafidianana na fifantohana amin'ny lohahevitra toy ny Fitiavana, Famelan-keloka, Fanahy Masina ary ny sisa. Ary koa, amin'ny fotoana very antsika amin'ny toerana hanombohana dia manana ny epistily nosoratan'i Apôstôly Paul ho an'ny Fiangonan'Andriamanitra. Ny Evanjely efatra, ao amin'ny Testamenta Vaovao, ny salamo sy ny ohabolana ary koa ny boky hafa ao amin'ny Baiboly. Na firy na firy ny fotoana noforonintsika hisaintsainana, ny zava-dehibe dia ny fampiasantsika azy. Na dia ny fisaintsainana izay mitaky fifantohana amin'ny Tenin'Andriamanitra aza dia misy toerana iray hifantohana tanteraka, izay mifantoka amin'ny lohahevitra sy lohahevitra ao amin'ny bokin'ny Baiboly.
Mitadiava fanampiana sy fitarihan'ny Fanahy Masina
Ny filàna mitady ny fanampiana sy ny fitarihan'ny Fanahy Masina antsika hanafoana ny fiankinan-tena. Fomba iray hanehoana fa tsy novelomina ilay idirantsika, fa tsy boky mahazatra nosoratan'i Chimamanda Adichie, Woke Soyinka na Akin Alabi. Fampiasam-bola ara-panahy ary tsy maintsy raisina tahaka izany.
Aza hadino ny mandika ny hevitry ny Fanahin 'Andriamanitra mba hahazoanao fahalalana amin'ny ezaka ataontsika misaintsaina.
Halalino ny soratra masina
Ny fandinihana dia mitaky ny halalin'ny famakiana. Andalana isan-tsipika, teny isaky ny teny, dikany - ho an'ny fahatakarantsika.
Rehefa misaintsaina ny Baiboly isika dia manamarika ny Pre-text, Text ary Post-Text. Izany dia mitranga rehefa nifantoka tamin'ny lohahevitra iray, lohahevitra iray, lohahevitra ao amin'ny Baiboly isika.
Ao amin'ny Fampianarana Baiboly dia manamarika isika hoe iza no miteny, inona no voalaza ary iza no voalaza. Amin'ny ankapobeny, tokony hahatakatra ny sahan-kevitra amin'ny fandalinana ny Baiboly isika.
Ary, amin'ny fanampiana ny fahalalantsika, dia mampiasa fitaovana hafa isika. Toy ny fandikan-teny hafa amin'ny Baiboly izay mandika ireo teny amin'ny tena izy. Mitady teny tsy mahazatra izahay amin'ny alàlan'ny rakibolana na thesaurus. Ohatra tsara ny fianarana Baiboly nataon'i Jimmy Swaggart.
Tahaka ny ataontsika amin'ny anjarantsika amin'ny fampiasana fitaovam-pikarohana izay manampy amin'ny fanazavana ny zavatra novakiana. Zava-dehibe ny hivavahantsika noho izay novakintsika. Ny votoatin'ny vavaka dia ny fampisehoana fa tsy miankina amin'ny tenantsika manokana isika amin'ny fandikana. Mivavaka amin'ny Ray izahay mba hanampian'ny Fanahin'Andriamanitra antsika hahita sy hahatakatra izay voasoratra.
Matetika isika dia mazàna mandika ny soratra masina miorina amin'ny fahaizantsika manokana. Raha tsy ny mason'ny Fanahin'Andriamanitra no manokatra ny masontsika dia tsy hitantsika izay rehetra nomaniny ho antsika.
Efes. 1: 17-22
17 mba hanomezan'Andriamanitr'i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain'ny voninahitra anao, ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana Azy:
18 Ny mason 'ny fahalalanao nohazavaina; mba ho fantatrareo ny anton'ny fiantsoana azy sy ny haren'ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina,
19 Ary ny fihoaran'ny halehiben'ny heriny ho antsika izay mino paroasy, araka ny fiàsan'ny herin'ny faherezany,
21 Ambonin'ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononina, tsy amin'izao fiainana izao ihany, fa amin'ny ho avy koa,
22 ary efa nanisy ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony Izy ka nanao Azy ho Lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana,
Apôstôly Paul mivavaka ho an'ny fiangonana Efesosy mba hampahiratina ny mason'izy ireo anaty, hazavaina, hivavaka mba ho tototry hazavana ny mason'izy ireo hahafantaran'izy ireo ny lova azony. Zavatra iray ho an'Andriamanitra ny nanomana lova ho an'ny Azy, zavatra hafa ho an'ny mino ny fahalalana an'io hazavana io. Ilay hazavana tonga amin'ny alàlan'ny vavaka.
Fanontaniana sy porofo maromaro avy amin'ny epistily izay nivavahan'ny Apôstôly Paul. Ny vavaka dia manampy ny fisaintsainantsika.
Efes. 3: 14-19
Ary noho izany antony izany no andohalehako amin'ny Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika,
15 Izay nantsoina ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany,
16 mba homeny anareo, araka ny haren'ny voninahiny, mba hahazo hery amin'ny heriny amin'ny alalan'ny Fanahiny ny toe-panahinareo;
17 mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana; ianareo, hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavana ianareo,
18 Enga anie ho afaka takarina amin'ny Fetin'ny maty hahafantatra tsara izay sakany sy lavany, ary ny halaliny, sy ny hahavony;
19 ary hahalala ny fitiavan'i Kristy, izay mihoatra noho ny fahalalana, mba mba hamenoana anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra 'Andriamanitra.
Hitantsika ny porofo iray hafa fa nivavaka ny Apôstôly Paul. Ny vavaka no fanalahidy. Ny vavaka dia fiankinana tanteraka - amin'Andriamanitra.
Diniho ny teny.
Misy ny vokatry ny vavaka ao an-tsain'ny mino. Manova ny toe-tsainy izany. Io no teboka ahitan'ny mino ny zavatra voalaza. Tena misy izy io toy ny fahalalana ny fitafiana
Misy taratra iray satria mihatra amin'ny mombamomba antsika io. Manomboka mahita ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny olona isika ary milentika ny fahatakarana.
Saintsaino ny tadidinao.
Rehefa misaintsaina ny mahatadidy isika dia mandray am-po izany. Mandray an-tsoratra izahay. Na amin'ny penina sy taratasy na amin'ny fangatahana finday. Point is Notes dia nalaina.
Mahatadidy izay noeritreretintsika mafy foana isika ary nanomboka nipetraka tao anaty ny teny. Amin'ny fahatsiarovan-tena dia raisintsika am-po izy ireo.
Ny fisaintsainana mihitsy dia tsy faran'ny fa fitaovana ho amin'ny tanjona farany. Ho ezaka tsy misy dikany izany raha tsy misy ny fanondroana ny fisaintsainantsika.
Amin'ny fampiharana, misy taratra. Ny Tenin 'Andriamanitra no boky torolalana ho an'ny fiainana. Amin'ny fisaintsainana dia manavao ny saintsika isika.
1 Koa mangataka aminareo aho, ry rahalahiko, noho ny famindram-pon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho sorona velona, ​​masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompoana mety hataonareo izany.2 Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao; fa miovà amin'ny manavao ny sainao mba hizahan-toetra izay sitrapon'Andriamanitra, izay tsara sady ankasitrahana no tonga lafatra.
Ny valin'ny fisaintsainana dia tokony hisaintsaina ny fiainantsika. Miantso fangatahana izy io. Ary ny fampiharana dia andraikitra. Ny Kristianisma mihitsy no mitaky andraikitra.
Tsy maintsy mifoha amin'izany andraikitra izany isika. Tonga amintsika ny andraikitra raha misafidy ny hitombo isika dia eo ny fanampiana mba hitombo.
2Tim. Mianara mba hiseho amin'Andriamanitra fa ankasitrahana ianao, mpiasa tsy mila menatra, mizara tsara ny teny fahamarinana.
fanahy manetry tena
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny momba
Next lahatsoratraFomba fivavaka amin'ny fanahy
Andininy Baiboly 10 Tsy tokony hohadinoinao rehefa mivavaka mba hahazoana famelan-keloka
Andininy Baiboly 10 Tsy maintsy fantatrao rehefa mivavaka mba hahazoana famindram-po
Salamo 18 Midika andinin-teny araka ny andalana
Zava-bavaka 30 ho an'ny mpiasa ao am-piangonana
Novambra 5, 2019
30 Vavaka hanoherana ny sakana manoloana ny fahatanterahan'ny tanjoko
Vavaka Atao ho fanasitranana aretin-tsaina hafahafa
Febroary 15, 2019